Mayelana NATHI - Changzhou Precise Package Co., Ltd.
Iphakethe eliqondile belisunguliwe futhi lithembekile futhi nomhlinzeki ohlolwe nge-BSCI iminyaka engaphezu kwengu-10, ikakhulu sisezitolo zokupakisha nezikhwama zokuphromotha ezinabasebenzi abangaba ngu-100 no-3000 square metres wokwakha ifektri, futhi siyaziqhenya ngezitayela eziningi zezikhwama zephakheji uzothola kukhathalogi yethu. Iqoqo lethu lezikhwama iza ngemibala eminingi futhi yenziwa ngezinto ezifana Nokwelukiweyo okungafani, i-PP Nokwelukiweyo, i-RPET engesiyo eyelukiweyo, i-Polyester noma iNayiloni, i-Canvas & Ukotini, iJute & Bamboo, i-Neoprene, i-PVC, i-PEVA nePhepha njll.
Kuyinjongo yethu ukuqhubeka nokuba yinkampani yezikhwama ezivelele kunazo zonke eChina. Abasebenzi bethu banolwazi cishe kuzo zonke izinhlobo zokuphrinta ezitholakala kwimikhiqizo yokuphromotha, futhi ungakhetha kusuka ekuphrintweni kwesikrini, ukuphrinta kwamachashazi, ukudlulisa ukushisa, isitembu esishisayo, i-lamination, i-laser, umbhalo oqoshiwe, umshini wokushicilela nabanye.
Ephaketheni eliqondile, singathanda ukukubonisa ukuthi izikhwama ezihlakaniphile nezintsha zingaba kanjani yindlela eshibhile yokwenza isithombe esihlala njalo nokuheha iso lomkhiqizo wakho. Cabanga ngephakeji eqondile njengesandiso seqembu lakho lokumaketha. Izikhwama zethu zanoma yiziphi izinto ziyasebenziseka futhi zinobungani bemvelo. Into enhle ngenkampani yethu izinketho ezingenamkhawulo nensizakalo eyenziwe ngokwezifiso esiyinikezayo. Imikhiqizo yenziwe ngokwezifiso ngokugcwele, futhi sinikeza ngemiklamo yamahhala.
Imikhiqizo yethuKungasetshenziswa emikhakheni ehlukene, kufaka phakathi izitolo ezinkulu, amakhaya, ukupakisha, izipho nezikhangiso. Ngobubanzi obuhlukahlukene, ikhwalithi ezinzile, amanani afanele kanye nokulethwa okufika ngesikhathi, imikhiqizo yethu yaziwa kabanzi futhi ithembekile ngabasebenzisi. Imboni yethu itholakala edolobheni laseChangzhou, eliqhele nge-180km ukusuka eShanghai, ihora eli-1 kuphela ngesitimela, sijabulela ezokuthutha ezilula kakhulu. Wamukelekile ukuxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi, impendulo esheshayo kungakapheli amahora angu-12 iqinisekisiwe.
Imininingwane yethu yamakhasimende